I-Canada isebenzisa umkhiqizi womshini wokukhiqiza umshini we-platinum
South African Zulu I-Canada isebenzisa umkhiqizi womshini wokukhiqiza umshini we-platinum
Uhlaka lwama-aluminium nophahla lwamapulangwe lubukeka obuhle nombala ogqamile. Isetshenziswa kabanzi ensimini, efektri, ehhotela, ehotela, ehholo lokubukisa, eholidini, ezinqabeni zasendulo nasezindaweni zanamuhla.
Uhlaka lwe-aluminium nophahla lwamapulangwe umshini wokwakha umshini othengisa yonke indawo emhlabeni njengoGuena, Pakistan, India, Tusnia, Georgia njll. Bathanda udonga lwama-aluminium nophahla lwamapulangwe ophahleni lwezindlu.
Uhlaka lwe-aluminium ovamile nophahla lwepaneli ngaphambi kokugubha i-coil ingu-1000mm, izinto ezisetshenziselwa ukugcizelela izinto zensimbi ze-PPGI zangaphambili. Futhi ngemuva komqulu owenza ububanzi obuvamile buyi-840mm.
Uhlaka oluphelele lwe-Aluminium nodonga lwamapulangwe odweba umshini wokwakha umshini uhlanganisa i-decoiler, umshini wokwakha umshini, uhlelo lokulawula ikhompyutheni, i-puncher e-intanethi kanye ne-table out.